3 Nzira dzeKumanikidza Zorodza peji rewebhu & Regedza Cached Mapeji muGoogle Chrome - WebSetNet
3 Nzira dzeKumanikidza Zorodza peji reWebhu & Regedza Yakachengetwa Mapeji muGoogle Chrome
Iwe unofanirwa kunge wakanzwa nezve Cache Memory, iri chip-based komputa chikamu chinoita kuti kudzosa data kubva mundangariro yekomputa kunyatsoita. Inoita senzvimbo yekuchengetera kwenguva pfupi iyo processor yekombuta inogona kutora data kubva nyore. Cached Memory inoshandiswa mumafoni, mapiritsi, uye kunyangwe makomputa. Panyaya yekubhurawuza pawebhu, kuwedzera kumhanyisa kurodha peji, mabhurawuza ewebhu akagadzirwa kurodha pasi mapeji ewebhu uye kuachengeta munharaunda imomo pane hard drive yekomputa yako munzvimbo inonzi "cache".
Izvi zvinogona kukonzera nyaya diki kana iwe waita chero shanduko kuwebhusaiti yako sezvo vangave vasingaratidze kumusoro. Zvakare kune yakajairwa yevatengi cache mafaera anogona kukanganisa mashandiro sezvo komputa inogona kudzikira uye yako hard drive inogona kupera nzvimbo. Nhasi, tichagovana maitiro ekuzorodza kana kujekesa aya mafaira epawebhu rewebhu, kuti tigadzirise matambudziko aya.
Pane nzira nhatu dzekugadzirisa nyaya dzinokurukurwa pamusoro, dzinogona kuzorodza vhezheni yewebhusaiti, kujekesa kana kudzima kubhurawuza cache, kana kujekesa kuchengetedza kwenzvimbo uye chikamu chedata. Takakurukura maitiro ekuita izvi pazasi.
Kumanikidza Refresh Cache
Tinogona kuita Force Cache Refresh kuti tione shanduko dzakaitwa kune webhusaiti, kiyi musanganiswa wakasiyana kune akasiyana masisitimu anoshanda.
Mac / Apple: raira + R
Zvakare, Verenga | Google Chrome Yakavanzwa Zvimiro Zvinozoita Kuti Yako Browsing Nyore
Bvisa Kuchengetedzwa Kwemunharaunda uye Chikamu Chekuchengetedza
Kana iyo yekare cache faira iri kugadzira nyaya, uye iwe uchida kujekesa kana kubvisa zvekare cache mafaira, saka izvi zvinogona kuitwa kubva kunovandudza sarudzo kana Ongorora Element.
Vhura Google Chrome uye enda kune peji raunoda kuyedza.
Dzvanya-kurudyi pane peji uye enda unoongorora
Dzvanya paKushandisa tab
Pasi Pekuchengetwa Kwemunharaunda, Session Kuchengetedza, uye maKuki iyo faira yakambochengetwa uye makuki anogona kujekeswa nekudzvanya kurudyi pane yega faira.
RELATED TIP 6 Nzira dzeKufara-Tune Instagram Push Notifications Pafoni Yako
Dzima Browsing Cache
Kana iwe uchida kudzima zvachose cache, saka zvinogona kuitwa kubva kunovandudza sarudzo kana Ongorora Element. Kuremadza cache zvakare kwakanaka kubva kune Yakavanzika nzvimbo yekutarisa, semunhu chero anokwanisa kuwana komputa yako, haakwanise kutarisa kumusoro kwakachengetwa mafaera ekutsvagisa nhoroondo.
Dzvanya paNetiweki tebhu
Tarisa iyo Disable Cache Bhokisi
Ndizvozvo, ikozvino mafaera ekuchengetedza enhoroondo yako yemberi yekuvhura haazoponeswa.
Saka aya ndiwo maitiro aunogona kumanikidza kuzorodza cache, kujekesa kwenzvimbo yekuchengetedza uye sosi yekuchengetedza, kana kudzima zvachose mawebhusaiti cache mafaira ekutsetseka webhusaiti kuvandudza kana zvimwe zvakavanzika kubhurawuza ruzivo. Iwe unosangana kangani nenyaya dzakadai, uye iwe unofungei pamusoro peizvi? Tiudzei mumashoko ari pasi apa.
Matipi ekushandisa Ongorora Element yeGoogle Chrome browser
Shanduro T-FORCE XCALIBUR RGB DDR4 3600 Review
Maitiro Ekubvisa Chero Chero Webhu Bhurawuza Nhoroondo
Google Cache: Maonero Ekutarisa Mapeji Akachengetwa
Iyo Yakanakisa WordPress Caching plugins - WordPress plugin Yekodhi Yakajeka
Yakanakisa WordPress Cache plugin 2019